China nkedo ígwè ígwè emepụta na suppliers | Bocheng Co-ihe okike
Anyị factory bụ ọkachamara na a na ubi ihe karịrị afọ 10. Anyị nwere ike na-enye dị iche iche iche iche nke Ductile Iron Nkedo akụkụ na Gray Iron Nkedo akụkụ
Nọmalị na-emepụta na isi awọ ígwè HT200, HT250, ductile ígwè 65-45-12, 60-40-18, 80-55-06, 80-60-03, wdg
Agba ntụ / Grey Cast Iron
Igwe ntụ ntụ, ma ọ bụ isi awọ, bụ ụdị ihe nkedo nwere microstructure graphic. Akpọrọ ya aha agba agba ntụ nke mgbaji ọkpụkpụ ọ na-etolite, nke bụ n'ihi ọnụnọ nke graphite.
Ọ bụ ihe nkedo nkịtị na ihe nkedo a na-ejikarị dabere na ibu.
A na-eji ya maka ụlọ ebe ike nke akụrụngwa dị mkpa karịa ike ike ya, dị ka mgbochi ọkụ nke cylinder engine, ebe a na-agbapụta mgbapụta, ngwongwo valve, igbe eletriki, na ihe nkedo eji achọ mma. A na-ejikarị ihe nkedo ígwè na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-eme ka a na-eme ka ígwè na-eme ka ihe ọkụkụ na diski igwe.
The ductile ígwè mgbatị ngwaahịa na-ọtụtụ-eji Auto-ụgbọala, ụgbọ oloko, gwongworo, ụgbọala mmiri, Ngwuputa ígwè mmiri, ugbo ala ígwè akụkụ, akwa igwe akụkụ, ewu ígwè akụkụ, valves na mgbapụta akụkụ, wdg
Anyị nwere ike cutomize metal ulo oru mgbatị akụkụ dị ka kwa gị ịbịaru na techinical chọrọ.
Anyị nwere ike ime CNC machining mgbe ego mgbatị dị ka kwa gị chọrọ. Ọzọkwa ime n'elu ọgwụgwọ dị ka ogbugba ọgbụgba ọkụ, sere, zinc sere, polishing…
E wezụga, anyị ọkachamara injinia nwere ike na-enye ezi uche na aro gị ịbịaru na n'ichepụta ..
N'ihi na nke anụ àgwà na ezi uche price, anyị mgbatị ngwaahịa e exported ka North America, Western Europe, Austria, South American na India.
N'oge ntinye aka nke usoro nhazi nke ndị ahịa, anyị na-enye ndị ahịa ihe ntinye aka n'ihe gbasara usoro enwere ike, mbelata ego na ọrụ. Are na-nnọọ kpọtụrụ anyị maka oru oru na azụmahịa imekọ ihe ọnụ.
Nke gara aga: T slotted nkedo ígwè elu efere
Osote: konkiri atụ ngwaọrụ